» सुँघेरै कोरोना ठिक पार्ने औषधी नेपालमै बनाउने तयारी, सरकारी अनुमतिको प्रतिक्षा
सुँघेरै कोरोना ठिक पार्ने औषधी नेपालमै बनाउने तयारी, सरकारी अनुमतिको प्रतिक्षा
२०७८ जेष्ठ ७, शुक्रबार १२:३०
काठमाडौं । पूरै दक्षिण एशिया यतिबेला कोरोना महामारीको चपेटामा छ । भारतमा दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम जारी छ । नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरपछि झण्डै एक लाख २० हजारको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित फेला परिसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कूल चार लाख ८८ हजार ६४५ जना कोरोना पोजेटिभ देखिएका छन् । यो बिहीबारसम्मको तथ्याङ्क हो ।
सरकारले यसबीचमा कोरोनाको खोप ल्यायो । भारतबाट अनुदानमा दिएको १० लाख डोज र चीनबाट आएको आठ लाख खोप प्रयोग भइसक्यो । सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्यूटबाट २० लाख डोज खोप किन्ने सम्झौता गरेकामा १० लाख डोज मात्रै आयो र बाँकी तत्काल नआउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दैआउनु भएको छ । बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले बेलायती राजदूतलाई खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युदर बढ्दो छ । अस्पतालमा शय्या पाउन मुस्किल छ । अक्सिजनको अभाव पनि उस्तै छ । यस्तो विषम अवस्थामा पनि सहज उपलब्ध हुनसक्ने एउटा विकल्प रहेको डा. समर्थ सिंहको दावी छ । उनले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा नाकमा प्रयोग गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने खोप नेपालमै बनाउन सकिने राससलाई जानकारी दिए । उनले भने– “संसारका खोप उत्पादक विभिन्न कम्पनीहरुले नाकमा प्रयोग गर्न सकिने खोपको बारेमा गरेको शोध तथा अनुसन्धानलाई निक्कै अगाडि पु¥याइसकेका छन् । केही कम्पनीको खोप त परीक्षणको क्रम मै छ । सरकारले अनुमति दिए आगामी ६ महिनाभित्र नेपालमा पनि यस्तो खोप बनाउन सकिन्छ ।”
इजरायल र न्युजील्याण्डले त स्यानोटाइज नाम दिइएको नेजल स्प्रेलाई आन्तरिक प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ । यो सन्दर्भमा हाम्रोमा पनि नाकमा प्रयोग गरिने खोप तयार गर्न सकिने र पेटेन्ट राइट समेत पाइने डा समर्थ सिंह बताउँछन्। उनले कोरोना भाइरसको एन्टिजेन किन्न सकिने र नेजल स्प्रे मार्फत् खोप राखेर प्रयोग गर्न सकिने जानकारी दिए ।
यस्तो खोपले तीनदेखि चार हप्तासम्म काम गर्ने अनुसन्धानबाट फेला परेको उनको भनाइ छ । मुख वा नाकमा पुगेको भाइरसलाई त्यही रोक्न वा कम गर्न सकियो भने सङ्क्रमण हुने मात्रा कम हुने भएकाले पनि यो सरल र सहज विधि भएको उनको भनाइ छ । हाल काठमाडौंको बयोधा अस्पतालमा न्यूरोलोजीको एचओडी समेत रहनुभएका डा. सिंहले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा समेत यसबारेको आफ्नो प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।
“हालसम्म कुनै जानकारी त प्राप्त भएको छैन, आशा छ हाम्रो प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्छ । यो हामी जस्ता मुलुकका लागि ठूलो आशा र अपेक्षा समेत हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार आइजिए न्यूट्रलाइज्ड हुने अवस्थाका कारण कोरोनाको भाइरस मानव शरीर भित्र छिर्न सक्दैन । यो बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई समेत सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै पनि प्रकारको निश्चित तापक्रम यसका लागि आवश्यक नपर्ने भएकाले पनि नेपाल जस्ता देशले पनि यसको विकास गर्न संभव भएको डा. सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी खोप उत्पादक कम्पनीले कोरोना विरुद्ध लड्ने यस प्रकारको खोप बनाइरहेका छन् । नेपालका नियामक निकायले आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उक्त खोपका लागि अनुमति दिने विश्वास व्यक्त गर्दै डा. सिंह भन्छन्– “अनुमति पाएको केही समयभित्रै हामी काम शुरु गर्न सक्छौ्रं । यसका लागि कुनै पनि जटिलता र समस्या पर्ने छैन ।”
डा. समर्थ सिंह यसमा सहमति जनाउदै भन्छन्–“महङ्गो मूल्य तिरेर खोप खरिद गर्न नसक्ने देशका लागि नेजल खोप नै उपयुक्त र सही छनोट हुन सक्छ ।”
शोधमा सहभागी भर्जिनिया विश्वविद्यालयका डा बिल पेट्रीका अनुसार यस प्रकारको खोपको खोजी गर्नु सजिलो र सरल छैन तर, परीक्षण सफलताउन्मुख छ । यो कम उमेरका बालबालिकामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । नाट्रिक अक्साइड नेजल स्प्रे जस्तै हङकङ विश्वविद्यालयले समेत यसमा खोज गरिरहेको छ । झण्डै सात हजार बिरामीमा यो खोपको परीक्षण भइरहेकै पनि छ । नेपालमा समेत कोरोनाको खोप उपलब्ध गराएको भारतको सिरम इन्स्टिच्यूटले समेत सोही प्रणालीमा आधारित खोपको पहिलो चरणको परीक्षण गरिरहेको छ ।
डा समर्थ सिंहका विचारमा नेपालका नियामक निकायले अनुमति दिए यूरोपमा परीक्षण भइरहेको यस्तो प्रविधिलाई नेपालमा ल्याएर तत्कालै काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्छन्। रासस